Umaki: i-kroger | Martech Zone
Ambalwa kakhulu amabhizinisi asebenzisa amathuba angafakwanga wokuhlanganisa ubuchwepheshe beacon kuzinhlelo zabo zokusebenza ukukhulisa ukwenza ngezifiso kanye namathuba okuvala ukuthengiswa okuphindwe kayishumi usebenzisa ukumaketha okusondelene neziteshi zokuthengisa zendabuko. Ngenkathi imali yezobuchwepheshe be-beacon yayiyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.18 zamadola aseMelika ngo-2018, kulinganiselwa ukuthi ifinyelela emakethe eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.2 zamadola aseMelika ngonyaka ka-2024. I-Global Beacon Technology Market Uma unebhizinisi lokumaketha noma lokuthengisa, kufanele ucabangele ukuthi uhlelo lokusebenza kanjani
I-Kroger Chefbot: Icala Elikhulu Lokusebenzisa Ekuhlinzekeni Inani Emithonjeni Yezokuxhumana nge-Bot Technology
NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 Douglas Karr
I-Kroger iyinketho yesitolo esikhulu engiyithanda kakhulu. Banikela ngokulethwa ekhaya, ukulanda, ukuzihlola, izikena zokuhlola, nokuningi. Le nkampani iyabona ukuthi ukuhlinzeka ngenani elifanele kanye nesevisi yamakhasimende kubaluleke kakhulu empumelelweni yanoma iyiphi inhlangano. Ubuchwepheshe, kunjalo, buyindlela yokuthola lokhu. Lokho akusho ukuthi abantu nezinqubo akubalulekile, kumane kusho ukuthi ukutshalwa kwezimali ukunikeza inani kumakhasimende akho ekugcineni kungukutshalwa kwemali ekuboneni komkhiqizo wakho.
Izibalo zabantu ze-Online Grocery Shopper
NgoMgqibelo, ngoMashi 19, 2016 NgoMgqibelo, ngoMashi 19, 2016 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule ngivivinye Uhlu lokuchofoza, ukuthenga kukaKroger online online. Uhlelo lwalungenasici, lunezinzuzo eziningi ngaphezu kokuthenga ezitolo. Okokuqala, ngikwazile ukubuka isabelomali sami ngenkathi ngifaka into ngayinye enqoleni yami. Ngikwazile ukubona kahle yonke into esendalini. Uhlelo lalandelela imikhiqizo yami ejwayelekile engiyithengile. Futhi kungithathe imizuzu eyi-10 ukushayela phezulu, ukuba neqembu laseKroger lilayishe imoto yami, futhi lihlole
3 Okhiye Bokwenza Isipiliyoni Sesitolo Esisha… kanye Nemali Engenayo
NgoLwesibili, Okthoba 20, 2015 NgoMsombuluko, Okthoba 19, 2015 Douglas Karr
Kule mpelasonto bengiyothenga endaweni entsha yemakethe iKroger. Inothi elingezansi… ukube nje uKroger ubecabanga ukuthi ukutshala imali ebukhoneni babo kwi-inthanethi bekubaluleke njengobukhona babo bezitolo. Ngiyahlubuka. Imakethe entsha yakhiwe ngaphesheya komgwaqo ukusuka eKroger edlule. Isinyathelo esisodwa ngaphakathi futhi uyabona ukuthi kungani. Ibhikawozi elinesinkwa esisha se-Artisan, idili elinekhawunta ye-gourmet ezinikele, i-Starbucks, ikhawunda le-sushi, kanye nokuthenga okukodwa kwezingane, amathoyizi,
NgoLwesithathu, Okthoba 15, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, ngaya ekuqeqesheni ngokunconywa ngumngane wami uDoug Theis kwezokuxhumana. UDoug nguyena nethiwekhi ongcono kunabo bonke engibaziyo ngakho ngangazi ukuthi ukuya khona kuzokhokha… futhi kwaba njalo. Engikufundile ukuthi abantu abaningi benza iphutha lokubeka inani kuxhumano oluqondile, kunokuxhumeka okungaqondile. Isibonelo, ngingaphuma ngiyozama ukuhlangana nayo yonke inkampani yezobuchwepheshe bokumaketha ukubona ukuthi ngabe